သွေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ဘာတွေသိသင့်လဲ? | yathar Magazine
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုအပြင် ဘယ်အသီးအရွက်တွေက ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးကြတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားပါ။
ဒါပေမဲ့ သွေးအမျိုးအစားကလည်း ကျန်းမာရေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘယ်လိုအရေးကြီးလဲဆိုတာ သိပ်မသိကြပါဘူး။ A, B, AB, O ဆိုပြီးသွေးအမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့အထဲက သွေးအမျိုးအစားအသီးသီးအတွက် ခန္ဓာကိုယ် ပိန်ဖို့၊ ရောဂါတွေကို ခုခံကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီး သီးသန့်အကြောင်းအရာလေးတွေ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။
အချက် ၁၀ ချက် ရှိတဲ့အထဲက တစ်ချက်ချင်းစီပြောပြပေးပါမယ်။
သွေးအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ကိုယ်ပိုင် အစာခြေဖျက်နိုင်စွမ်းနဲ့ weight loss အတွက် တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး မတူကြဘူးဆိုတာ ယုံကြမလားမသိဘူး။ အဲ့အတွက်လည်း ဒီလိုလေးတွေရှိပါတယ်။
– O သွေးအမျိုးအစားအတွက် ဆိုရင် Protein ဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အသားငါးတွေကိုစားပေးခြင်းက အကောင်းဆုံးပါ။
– A သွေးအမျိုးအစားအတွက် ဆိုရင်တော့ အသားငါးတွေအများကြီးစားပေးဖို့ သိပ်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ A သွေးအမျိုးအစားတွေအတွက် အသီးအရွက် စားပေးတာက ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးပါ။
– B သွေးအမျိုးအစားအတွက်ဆိုရင်တော့ ကြက်သားစားတာကိုရှောင်ပြီး အနီရောင် အသားတွေကို စားပေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။
– နောက်ဆုံး AB သွေးအတွက်ဆိုရင်တော့ Seafood တွေနဲ့ အဆီပါဝင်မှုနည်းတဲ့ အသားတွေကို စားပေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ သွေးနီဥတွေက မတူညီကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သွေးအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအလိုက် သူတို့ရဲ့ ခုခံနိုင်စွမ်းတွေကလည်း ကွဲပြားကြပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သွေးအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီရဲ့ characteristics တွေအရ သက်ဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုစီကိုတော့ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
သွေးအမျိုးအစားက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ Personality ပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ပါသလား။
– O သွေးပိုင်ရှင်တွေက creative ကောင်းတယ်။ Social ကောင်းပြီး confident ရှိကြတဲ့ သူမျိုးတွေပါ။
– A သွေးပိုင်ရှင်တွေက အေးချမ်းတယ်၊ အနုပညာပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါရမီပါတယ်၊ ပြီးတော့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူမျိုးတွေပါ။
– ဘဝအတွက် ခိုင်မာတဲ့ goals တွေကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီး strong ဖြစ်တဲ့ သူမျိုးတွေကတော့ B သွေးပိုင်ရှင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
– AB သွေးပိုင်ရှင်တွေက ယုံကြည်အားထားရတယ်၊ အရှက်ကြီးပြီးတော့ တာဝန်ယူချင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေလည်း ဖြစ်တဲ့အပြင် တခြားသူတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေပါ။
သွေးအမျိုးအစားနဲ့ Belly Fat
တချို့လူတွေက သူတို့ရဲ့ Belly fat နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပူစရာမလိုတဲ့သူတွေကို တွေ့ဖူးလား။ တစ်မျိုးပြောရရင် ဘယ်လောက်စားစား မဝတဲ့သူမျိုးပေါ့။ A သွေးအမျိုးအစားတွေက carbohydrates ဓါတ်တွေကို အလွယ်တကူခြေဖျက်ပေးနိုင်တာကြောင့် ဘယ်လောက်စားစား မဝနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ carbohydrates ဓါတ်ကို ခြေဖျက်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့( လေတိုက်တိုင်း ဝ ) O သွေးအမျိုးအစားပိုင်ရှင်တွေကတော့ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း Belly Fat ရနိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ( ငိုပြီလေ )
သွေးအမျိုးအစားနဲ့ လက်ထက်ခြင်းက မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကလေး ကိစ္စမှာတော့ သက်ဆိုင်လာပါပြီ။
RH factor တွေကြောင့် မိဘနှစ်ပါးရဲ့ သွေးအမျိုးအစားတွေက ကိုယ်ဝန်အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။
RH factor တွေမှာ RH(-) နဲ့ RH(+) ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတဲ့အပြင် အများစုကတော့ RH(+) တွေ များကြပါတယ်။
A သွေးအမျိုးအစားပိုင်ရှင်တွေက Stress ပိုဖြစ်လွယ်တာကြောင့် အနားယူခြင်း၊ exercise ပြုလုပ်ခြင်း၊ Yoga နဲ့ တရားထိုင်တာမျိုးတွေ ပိုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ B သွေးအမျိုးအစားပိုင်ရှင်တွေက စိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို challenge လုပ်ရတာမျိုးကြိုက်တာကြောင့် tennis ကစားခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုပြီးပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်က ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ information အချို့ကို သွားလေရာ အမြဲတမ်းယူသွားသင့်ပါတယ်။ အရေးပေါ် အခြေအနေတစ်ခုခုဖြစ်လို့ ဆေးရုံတွေဘာတွေရောက်ရင် သွေးအမျိုးအစားကို လွယ်လွယ်သိရင် ဘယ်လိုသွေးအမျိုးအစာကို လိုအပ်လဲဆိုတာ သိနိုင်တာပါတယ်။
သွေးအမျိုးအစားနဲ့ Stress သက်ရောက်မှု
သွေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး stress သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ အံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူ စိတ်ရှုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးနဲ့ တွေ့ပြီဆိုရင် ကျိန်းသေပါတယ် အဲ့ဒါ O သွေးပိုင်ရှင်တွေပါပဲ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ သွေးနီဥလေးတွေရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်က antigens လို့ခေါ်တဲ့ မော်လီကျူးတွေ ရှိခြင်း မရှိခြင်းအပေါ်မူတည်ပြီး သွေးအုပ်စုတွေ ကွဲပြားစေပါတယ်။
မိခင်နဲ့ ဖခင်ရဲ့ RH(+) နဲ့ RH(-) အပေါ်မူတည်ပြီး ကလေးအပေါ်မှာ RH အမျိုးအစားကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်။
Covid-19 ကာလအတြင္းမွာ ကေလးေတြဖ်ားနာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?
ေရႊ ရင္ ေအး